मार्क्सका महान पाँच भनाइ – आफ्नो प्रेरक संसार
मार्क्सका महान पाँच भनाइ
Bibas chetan — ५ असार २०७६, बिहीबार २०:००0comment
के तपाईँ हप्ताको सात दिन काम गर्नुहुन्छ? कामका बेला खाजा/खाना खाने समय लिनुहुन्छ? एउटा निश्चित उमेरपछि तपाईँ सेवा निवृत्त हुन र निवृत्तिभरण पाउन चाहनुहुन्छ?
यदि तपाईँको जवाफ सकारात्मक छ भने तपाईँ मार्क्सलाई धन्यवाद दिन सक्नुहुन्छ। लण्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्सका प्राध्यापक माइक साभेज भन्छन्, “पहिला पहिला लामो समयसम्म काम गर्न भनिन्थ्यो। तपाईँको समय तपाईँको हुँदैनथियो र तपाईँ आफ्नो जिन्दगीका लागि सोच्न पाउनु हुँदैनथियो।”
उनका अनुसार मानिसहरूलाई अधिकांश समय उनीहरूको परिश्रम अनुसारको पारिश्रमिक दिइने गरिएको थिएन र उनीहरूमाथि शोषण गरिएको थियो। मार्क्स चाहन्थे मान्छेको जिन्दगीमाथि उसकै अधिकार होओस्, मान्छेको जीवन अरू कुराभन्दा सर्वोपरी होओस्।
उनी चाहन्थे मान्छेहरू स्वतन्त्र होऊन् र मान्छेभित्रको सिर्जनात्मक क्षमताको विकास होओस्। साभेज भन्छन्, “वास्तवमा मार्क्स भन्छन् हामीले हाम्रो जीवन यसरी जिउनुपर्छ कि जसको मूल्याङ्कन कामले नगरियोस्। एउटा यस्तो जीवन जसको मालिक हामी आफैँ होऊँ, जहाँ हामी आफैँले यो कुराको निर्धारण गर्न सकौँ कि हामी कसरी जिउन चाहन्छौँ। आजकाल यही सोचका साथ मानिसहरू जिउन चाहन्छन्।”
तपाईँ संगठित भएर विरोध गर्नुस् र परिवर्तनका लागि संघर्ष गर्नुस्।संगठित विरोधका कारण कैयौँ देशको दिशा बदलिएको छ।
विभिन्न प्रकारका भेदभावविरूद्ध कानून बनोस्। लण्डनमा हुने मार्क्सवादी कार्यक्रमका आयोजकमध्येका एक लुइस निल्सन भन्छन्, “समाजलाई बदल्न क्रान्ति आवश्यक हुन्छ। हामी समाजको राम्रोका लागि विरोध प्रदर्शन गर्छौँ। यसरी सर्वसाधारणले आठ घण्टा काम गर्ने अधिकार पाएका हुन्।”
मार्क्सको व्याख्या एक दार्शनिकको रूपमा गरिन्छ। तर निल्सन यो कुरासँग असहमत छन्। उनी भन्छन्, “उनले जे लेखे र गरे त्यो एउटा दर्शन जस्तो लाग्छ। तर जब तपाईँ उनको जीवन र कामलाई नजिकबाट नियाल्नुहुन्छ तब तपाईँ महसुस गर्नुहुन्छ कि उनी एक अभियानकर्मी थिए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय कामदार संघको स्थापना गरे। उनी गरीबहरूसँगै हड्तालमा सहभागी भए।”
सरकार र ठूला व्यापारिक घरानाले साठगाँठ गरे तपाईँलाई कस्तो लाग्ला? व्यापारिक प्रतिष्ठानले तपाईँका सबै जानकारी सरकारलाई उपलब्ध गराइदिए के तपाईँ आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ?
“मार्क्सले त्यतिबेला प्रकाशित हुने गरेका लेखहरूको अध्ययन गर्दथे। उनी यो निष्कर्षमा पुगेका थिए कि गरीबहरूले गर्ने अपराधलाई सञ्चारमाध्यमले ठूलो स्थान दिन्छन् जबकि नेताहरूले गर्ने अपराधको घटनालाई दबाउँछन्।” -bbc